Vaovao - Famoronana entona voajanahary
Famoronana entona voajanahary
Ny solika sy ny entona voajanahary dia antsoina hoe solika. Ny menaka maloto dia singa hydrocarbon somary mavesatra miforona voajanahary amin'ny endrika ranon-javatra, fa ny entona voajanahary kosa dia singa hydrocarbon somary maivana misy amin'ny endrika gazy. Ny entona voajanahary avy amin'ny fantsakana entona dia antsoina hoe entona entona, ary ny entona voajanahary misaraka amin'ny solika avy amin'ny fantsakana solika dia antsoina hoe gazy mifandraika.
Ny entona voajanahary dia fifangaroan'ny gazy hydrocarbon, izay misy rano sy loto hafa koa. Izy io dia ahitana karbaona, hydrogène, solifara, azota, oksizenina ary singa trace, indrindra indrindra karbaona sy hydrogène, miaraka amin'ny karbaona 65% - 80% ary ny hydrogène dia mitentina 12% - 20%. Ny firafitry ny entona voajanahary vokarina any amin'ny faritra isan-karazany dia samy hafa, ary na dia ny firafitry ny entona voajanahary vokarin'ny lavadrano roa samy hafa ao amin'ny fitahirizana iray ihany koa dia samy hafa, miaraka amin'ny ambaratonga samihafa ny fitrandrahana solika, ny firafitry ny entona voajanahary vokarin'ny lavadrano iray ihany dia ho miova koa.
Ny hydrocarbon lehibe amin'ny entona voajanahary dia metana, ary misy etana, propane, butane, pentane, hexane kely, heptane ary entona mavesatra hafa.
Fanasokajiana ny entona voajanahary
Misy fomba telo fanasokajiana ny entona voajanahary
(1) Araka ny toetran'ny tahiry mineraly, dia mizara ho entona entona tsara sy entona mifandraika amin'izany.
Entona mifandray: enti-milaza ny entona voajanahary tafasaraka amin'ny menaka maloto amin'ny fantsakana solika.
Latsa-dranomaso: enti-milaza ny entona voajanahary avy amin'ny lavadrano entona.
(2) Araka ny firafitry ny hydrocarbon amin'ny entona voajanahary (izany hoe, araka ny votoatin'ny hydrocarbon ranon-javatra amin'ny entona voajanahary), dia azo zaraina ho entona maina, entona mando, entona matavy ary entona manankarena.
Fomba famaritana C5 - fizarana ny entona maina sy mando
Entona maina: enti-milaza ny entona voajanahary misy ranoka hydrocarbon mavesatra mihoatra ny C5 (pentane) ary fanasokajiana sy fananana ambany noho ny 13,5 cubic centimeter amin'ny 1 metatra toratelo amin'ny entona voajanahary.
Entona mando: enti-milaza ny entona voajanahary misy ranoka hydrocarbon mihoatra ny C5 mihoatra ny 13,5 santimetatra toratelo amin'ny entona voajanahary 1 metatra toratelo.
Fomba famaritana C3 - fizarana ny entona mahantra sy manankarena
Entona matavy: enti-milaza ny entona voajanahary misy votoaty ranoka hydrocarbon mihoatra ny C3 latsaky ny 94 santimetatra toratelo amin'ny entona voajanahary 1 metatra toratelo.
Entona manankarena: ilazana ny entona voajanahary misy votoaty ranoka hydrocarbon mihoatra ny C3 mihoatra ny 94 santimetatra toratelo amin'ny entona voajanahary 1 metatra toratelo.
(3) Araka ny votoatin'ny entona asidra, ny entona voajanahary dia azo zaraina ho entona asidra sy entona madio.
Entona voajanahary marikivy: manondro ny entona voajanahary misy sulfide be dia be, gazy karbonika ary entona marikivy hafa, izay tsy maintsy tsaboina alohan'ny hahatongavany amin'ny fenitry ny fitaterana fantsona na ny tondro kalitaon'ny entona entona.
Entona madio: enti-milaza ny entona misy sulfide kely na tsy misy afa-po, izay azo aondrana sy ampiasaina tsy misy fanadiovana.